एक Gif एनिमेशन को फ्रेम बाहिर निकाल्न को लागी ग्याजेट समाचार
Gif एनिमेसनबाट फ्रेमहरू कसरी निकाल्ने?
हामी सबैलाई थाहा छ कि एक Gif एनिमेसन निश्चित संख्याको फ्रेमहरू (फ्रेमहरू) बाट बनेको हुन्छ, जुन इन्टरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजरमा स्वचालित रूपमा खेल्दछ यदि हामी यसलाई चयन गर्छौं र यसलाई इन्टरफेसमा तान्छौं भने।
अहिले, के हुन्छ यदि हामीलाई यस Gif एनिमेसन को एक फ्रेम चाहिन्छ? पक्कै पनि धेरै मानिसहरूलाई यो भएको छ, कि जब तिनीहरू यो एनिमेसन खेलिरहेका थिए, तिनीहरूले याद गरे कि यसको कुनै पनि तस्विर उनीहरूको लागि कुनै पनि काम वा परियोजनाको लागि रुचि हुन सक्छ। केहि उपकरणहरू र साना ट्रिकहरू प्रयोग गरेर, हामी हाम्रो रूचिमा निर्भर गर्दै यी टेबलहरू मध्ये एक वा बढी डाउनलोड गर्ने सम्भावना हुनेछ।
1 किन पुन: प्ले मा एक स्क्रीनशट हुन?
किन पुन: प्ले मा एक स्क्रीनशट हुन?
कसैले "प्रिन्ट स्क्रिन" कुञ्जी प्रयोग गर्न को लागी तुरून्त क्याप्चर गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्दछ जब त्यस समयमा एनिमेसन चलिरहेको छ; समस्या यो हो कि धेरै टाढै हामी चित्रकला कब्जा गर्न सक्षम हुनेछौं जुन त्यो क्षणमा हाम्रो लागि साँच्चै रोचक छ। यस विकल्पमा कसैले योजना बनाएको हुन सक्ने अर्को विकल्प भिडियो सम्पादन अनुप्रयोगले समर्थन गर्ने छ, किनकि एनिमेसन व्यावहारिक रूपमा यस विशेषतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। सत्य यो हो कि यस Gif एनिमेसन कुनै पनि भिडियो सम्पादकमा आयात गर्दा साधारण छविको रूपमा देखा पर्नेछ यो मुख्य विशेषता यो होसम्पूर्ण अनुक्रमको केवल पहिलो चार देखाउँदै।
एक रोचक निःशुल्क उपकरण जुन «को नाम द्वारा जान्छइरफानभ्यूUs हामीलाई एनिमेसन को एक वा धेरै फ्रेमहरू कब्जा गर्न मद्दत गर्न सक्दछ। हामीले गर्नुपर्ने भनेको यसलाई चालु गर्नु हो, यसलाई फाईलमा आयात गर्नुहोस् र विकल्पहरूमा जानुहोस्, जहाँ त्यहाँ एउटा प्रकार्य छ जसले हामीलाई मद्दत गर्दछ «सबै फ्रेमहरू निकाल्नुहोस्"।
त्यसपश्चात, हामीले फोल्डरमा जानुपर्नेछ जहाँ यी फ्रेमहरू झिकिएका छन् र छनौट गर्नुहोस् जहाँ हामी इच्छुक छौं; यस उपकरणको विकासकर्ताले त्यो उल्लेख गर्दछ यदि तपाईं यी फ्रेमहरू मध्ये एउटा मात्र चाहनुहुन्छ भने, तपाईं Gif एनिमेसन आयात गर्न सक्नुहुन्छ र p G »कुञ्जी थिचेर पज गर्न सक्नुहुन्छ जब हामीले फ्रेम फेला पार्‍यौं जुन हामीलाई रूचि छ। त्यस पछि, हामीले केवल फ्रेम "C" थिच्नु पर्छ त्यो फ्रेम निकाल्नका लागि।
यस उपकरणसँग अझ उन्नत प्रकार्यहरू छन् भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि, यसको स्थापना प्याकेज भित्र एक चाखलाग्दो विकल्प छ जुन सहयोग गर्दैन Gif एनिमेसन को भाग हो कि सबै फ्रेमहरु निकाल्नुहोस्.
रूपान्तरण -coalesce एनिमेशन.gif एनिमेशन_% d.gif
तपाइँले विन्डोजमा टर्मिनल खोल्ने आदेश रेखा प्रयोग गर्नुपर्नेछ, हामीले माथिल्लो भागमा राखेको जस्तै धेरै नै लेख्नुपर्‍यो; तपाईले बुझ्नुहुनेछ, कमाण्ड "रूपान्तरण" एक हो जुन तपाईंलाई यी फ्रेमहरू निकाल्न मद्दत गर्दछ, जुन यो अनुप्रयोगको लागि सानो अतिरिक्त हो।
यो वैकल्पिक नाम «FFmpegWe हामीले माथि उल्लेखितसँग त्यस्तै प्रकारका प्रकार्यहरू छन्; यसको मतलव हामीले कमाण्ड लाइन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ, जस्तै हामीले तल राख्ने उदाहरण जस्तै।
ffmpeg -i एनिमेशन.gif एनिमेसन% 05d.png
दुबै वैकल्पिक जुन हामीले पहिले उल्लेख गर्यौं र हालको एकले फ्रेमहरूलाई उही ठाउँमा बचत गर्नेछ जहाँ GIF एनिमेसन छ; माथिको उपकरणले तपाईलाई १०० फ्रेम मात्र मात्र निकाल्न मद्दत गर्दछ। यो जबकि हालको एकको यसको विकासकर्ताको अनुसार कुनै सीमा छैन।
कुनै पनि विधि जुन कमांड लाइन समावेश गर्दछ केही व्यक्तिको लागि असुविधाजनक हुन सक्छ, किनकि यदि एक चरित्र वा चिन्ह गलत हिज्जेमा छ भने, विधि मात्र काम गर्दैन। यदि तपाईं ग्राफिकल ईन्टरफेसको साथ विकल्प चाहनुहुन्छ जुन बुझ्न सजिलो छ भने, हामी सिफारिस गर्दछौं «GifSplitter«, जुन नि: शुल्क पनि छ र विन्डोजको लागि काम गर्दछ।
यस संग तपाईं को संभावना हुनेछ GIF एनिमेसन सम्बन्धित सबै फ्रेमहरू निकाल्नुहोस्, तपाईं ती ठाउँहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं यी तत्वहरू बचत गर्न चाहनुहुन्छ। हामीले माथिल्लो भागमा राखेको छविले यो उपकरणसँग काम गर्न कत्ति सजिलो छ भन्ने देखाउँदछ, किनकि अघिल्लो विकल्पहरूको विपरित, यहाँ प्रयोगकर्ताले GIF एनिमेसनबाट निकालेका फ्रेमहरूको लागि पूर्ण भिन्न निर्देशिका परिभाषित गर्न सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » Gif एनिमेसनबाट फ्रेमहरू कसरी निकाल्ने?
धन्यबाद, ImageMagik प्रकार्यले मलाई स्ट्याकमा मद्दत गर्यो!
Ererdf4543545 लाई जवाफ दिनुहोस्
विन्डोजमा हाम्रो यूएसबी पेनड्राइभ ईन्क्रिप्ट गर्न alternative विकल्पहरू
एमएस अफिस सीरियल नम्बर कसरी प्रविष्ट गर्ने जब स्वचालित रूपमा स्थापना हुन्छ